FTTH eriri optic ọnụ igbe FODB-8A e mepụtara iji na FTTH ngwọta nke telekomunikashions kwụsị ma ọ bụ kesaa feeder USB eriri ngwa anya udọ, kwachie udọ, pigtail udọ dị ka ike nke eriri nchupu igbe. Iji jikọọ ikpeazụ mile ọrụ. FODB-8A nwere ike n'ọrụ na ụlọ, FTTH closets, osisi, mgbidi.
Nnọọ pụrụ iche a haziri nke splice tree na ngwa na-enye ohere nke a Telecommunication nchupu igbe-ekwesị ekwesị maka PLC splitters, SC eriri ihe nkwụnye, na 12 splice nchedo aka uwe. All kwuru ngwa anya network ngwa nwere ike ofu n'ime FTTH igbe.
Igwe anaghị agba nchara agbatị nke eriri igbe ekwe fixating feeder USB nke dị iche iche size, enweghị slippage.
Plastic hangers nke Telecommunication igbe ekwe fixating nri emep uta eri site naịlọn agbatị.
FTTH nchupu igbe, FODB-8A nwere 12 ọdụ ụgbọ mmiri na-enye nwụnye site na otu na iri eriri optic dobe udọ.
FTTH nkesa igbe na-mere nke ABS, ịkwanyere, nke na-ekwe nkwa na mmiri, ájá, na-egosi na n'èzí ma ọ bụ ime ụlọ ojiji. Wall-n'ịnyịnya ụdị echichi na-eme site 4 galvanized kposara nke 18 4 size. HTTB nwere 2 mounts maka igwe anaghị agba nchara gbalaga ojiji. Optical nchupu igbe nwere fixation brackets maka cable waya. Ọ dịghị ala ngwaọrụ. Anti-vandal, ndị a kwadebere site mkpọchi na igodo.
Ndenye / mmepụta
Ke - 3 nke max DIA 17 mm,
Ọ - 8 nke max DIA 3 mm na 1 max DIA 10 mm
The akụkụ Fiber nchupu igbe bụ 210x195x55, ihe bụ dum ezuru kwesịrị ekwesị eriri ekwe okirikiri. Ìhè na-amasị anya, igbe nwere ike n'ibu nchebe na mfe mmezi. Na-enye ihe dị mfe ọrụ ohere ma ọ bụ data ohere dabeere FTTH.
Jera offers most completed product range of passive optical network accessories, for construction of FTTX solution. Such accessories as: Optic Pigtails, Splice protection sleeves, Fiber Adapter, Fiber Optic Cord, Fiber Optic Closure, FTTH Drop clamps, lead clamps, band and buckles, erughị ala clamps , wdg
The feeding optical fiber cable input in optical fiber box from the bottom. Feeder diameter should not exceed 17 mm. Then, branching drop wire or patch cords and pigtails cables connect with feeder cable by the SC fiber optical adaptors, or splice protection sleeves and managing from ngwa anya imechi igbe na-arụsi ọrụ ike ma ọ bụ ọzọ Optical Network Unit.
Previous: Clevis kwesịrị insulator CLF-16
Osote: 19′ Rack mount fiber optic distribution frame (ODF) 1U-12-SC
Eriri Optic Nkesa Box 8 cores
eriri nchupu igbe
FTTH nchupu igbe
ngwa anya imechi igbe
Optical nchupu igbe
Telecommunication nchupu igbe